Amin'ny firaisana ara-nofo tsy fiparitadritahan'ny Age fifandraisana intsony dia vitsy ny tranga. Na izany aza, olona an'ny vondrona sasany hiditra tamin'ny fifandraisana toy izany matetika kokoa noho ny hafa. Ohatra, araka ny fandinihana iray navoaka tao amin'ny Fanambadiana sy Natao Hodinihin'ny Mpianakavy, nisara-panambadiana ny lehilahy dia azo inoana fa ny vehivavy hanambady indray daty sy tanora kokoa noho izy be.
Nahoana no tena nisara-panambadiana ny lehilahy mijery vehivavy tanora kokoa ny mampiaraka?
Psikology miresaka momba ny toe-javatra maro izay mety hanosika ny olona nisara-panambadiana mba mitady vehivavy tanora kokoa noho izy ireo be noho ny mampiaraka. Ny lisitra eto ambany dia ahitana ny tena mahazatra azy ireo teo.
– Izy ireo mahita ny toe-tsaina ny tanora fiasàna sain'ny vehivavy manintona kokoa.
– Aorian'ny fisaraham-panambadiana, ny ankamaroan'ny olona dia mitaky fotoana be dia be ho sitrana; toy ny efa-pihetseham-po izy ireo ory, aleon'izy ireo vehivavy hampiaraka-pihetseham-po faran'izay kely entana. Ny vehivavy tanora kokoa, noho ny tsy mampiaraka traikefa, pihetseham-po amin'ny ankapobeny tsy mitondra entana.
– Vehivavy tanora tsy dia mety hanery ny olona mba hanorim-ponenana, ka afaka manana fianakaviana. Matetika izy ireo mieritreritra bebe kokoa ny ankehitriny noho ny momba ny ho avy; dia tia miaina ao amin'ny fotoana. Tsy manana fandaharam-potoana bebe kokoa ho azy mahatonga mampiaraka mahafinaritra ho an'ny olona nisara-panambadiana.
– Tena be mora kokoa ny volana ny tanora ny vehivavy. Nisara-panambadiana ny olona ao an-40 ny, 50'S na 60 ny matetika manana vola ampy mba haka ny tanora mpiara-miasa amin'ny toerana mahagaga izy ireo (ny ankizivavy) Efa hatramin'izay no tsy ho, hividy azy ireo fanomezam-pahasoavana ireo tsy nanonofy ny fahazoana sy mamaha ny olana (izay matetika adaladala ireo) ny fahamatorana be. Ireo zavatra ireo matetika ampy mba ho latsa-paka ao an-zatovovavy.
Raha ny anton-javatra rehetra resahina etsy ambony manana anjara toerana ny olona nisara-panambadiana rehefa manapa-kevitra ny hampiaraka ny vehivavy tanora kokoa noho izy be, dia mety hisy iray hafa izay antony ao ambadiky ny safidy toy izany ny olona. Misy olona izay manomboka mitady ny vehivavy tanora kokoa fotsiny izy ireo, satria tsy nahita na iza na iza afaka ny vondrona taona. Statistics manambara fa ny ankamaroan'ny fisaraham-panambadiana any amin'ny United States hatao raha ny lehilahy eo amin'ny fifandraisana misy eo 53 ary 72 taona; tena vitsy ireo vehivavy anisan'ny izao mijanona ho tokan-tena vondrona.
Nisara-panambadiana? Niaraka ny vehivavy tanora kokoa? Ataovy ireo zavatra ireo ao an-tsaina
Rehefa niaraka vehivavy tanora kokoa noho ianao be, no hotandremanareo ny zavatra sasany ao an-tsaina.
– Ny mpiara-miasa mahalala fa tsy ianao no tanora indrindra toko manodidina; izany, Tsy miezaka manaporofo hoe anisan'ireo. Aza manao loko fa ianao no tsy mahazo aina amin'ny; tsy manao zavatra izay matetika nataon'ny ry zalahy ny taranaka ankehitriny; tsy manao ezaka mba hampisehoana fa mbola matanjaka ampy. Ireo no matetika turnoffs lehibe ho an'ny vehivavy rehetra, na tanora na antitra.
– Mitondra ny tanora mpiara-miasa amin'ny fomba toy izany ianareo, dia ho tsaboina vehivavy ny taona. Raha toa ka lasa mahatsapa momba ny taona Fiparitahan'ny, ny fifandraisana dia tsy mety.
– Afaka mividy fanomezana antoka ho an'ny vehivavy ny vaovao eo amin'ny fiainanao, fa tsy tokony BE LOATRA. Raha be loatra FLASH vola, Mety hieritreritra ny vehivavy hoe ianao ka izao vao miezaka mba ho hita fotsy.
Fifandraisana eo amin'ny lehilahy zokiolona, ​​ary ny tanora toy ny ara-dalàna ny vehivavy dia toy ny misy tantaram-pitiavana tsy tapaka ny fifandraisana. Izany, raha mijery ny olona nisara-panambadiana miaraka amin'ny ankizilahy kely be tsy misy maha ratsy ao aminy.